45 Responses LeaveaReply Cancel reply
ဟန်တင့် November 3, 2012 - 8:02 pm စစ်မှန်တဲ့မီဒီယာရယ်လို့….မြန်မာပြည်မှာ ဧရာဝတီပါပဲ…မမှန်တဲ့သူတွေကတော့ ဘယ်ကြိုက်ပါ့မလဲ…..ဒါကတော့ ထုံးစံပဲ…….. ခွေးတွေတွေအများကြီးကြားထဲရောက်နေလို့ ၀ိုင်းဟောင်ကြတာဟာ မထူးဆန်းပါဘူး….”လေးစားပါသည် ဧရာဝတီ”
Reply Truth teller November 6, 2012 - 11:49 pm That’s right.
Reply ပါကြီးဖိုး November 3, 2012 - 8:04 pm ဆရာဦးဝင်းတင်ရဲ့အမြင်မှာ အစိုးရက လူထုထောက်ခံမှုရအောင် ရခိုင်အရေးကို အသုံးချနေတယ်ဆိုရင် ဒါဟာ လူသားချင်းစာနာစိတ် ကင်းမဲ့လွန်းရာကျနေပါတယ်။ လက်တလောအခြေအနေမှာ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ ထပ်မံမဖြစ်ပွားလာအောင် တကယ်လုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ရေရှည်အနေနဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ် အမြန်ရှင်သန်လာအောင်လုပ်ပြီး အခုလိုအကြမ်းဖတ်မှုတွေ ပေါ်ပေါက်မလာအောင် ဥပဒေစိုးမိုးမှုတွေနဲ့ ကိုင်တွယ်သွားသင့်ပါတယ်။ အခရာကတော့ ဒီမိုကရေစီလူဘောင်စနစ် ထူထောင်နိုင်ဖို့သာ ဖြစ်ပါတယ်။ အာဏာရှင်စနစ်ကတော့ လူနည်းစု ကောင်းစားနေတာကလွဲရင် ပြည်သူအများစုက ယခုထက် ပိုပြီး မွဲသထက်မွဲ၊ ရခိုင်အရေးအပါအဝင် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဟာလည်း အလှမ်းဝေးသထက် ဝေးလာမှာကတော့ ထင်ရှားသိသာနေပြီးသားပါ။
Reply flowerlover72 November 3, 2012 - 8:30 pm မင်းတို့သတင်းဌာနနာမည်က…ဧရာဝတီမဟုတ်တော့ဘူး…. နာမည်ပြောင်းလိုက်ပြီ… ဘင်္ဂါဝတီ….NLD..ကလည်း..နာမည်ပြောင်းလိုက်ပြီ…
Reply james November 12, 2012 - 9:38 pm ဒီမယ် ပန်းချစ်သူ၇၂
Reply === November 3, 2012 - 9:38 pm ဦးဝင်းတင်က ပြောတယ် -
ကောင်းဗျား ကျုပ် သေသင့်တယ် Reply မင်းကြီးညို November 3, 2012 - 10:06 pm မူဆလင်တွေက အာရဗ်နိုင်ငံကိုသွား
Reply အလှည့် November 3, 2012 - 10:14 pm ဘင်ဂလိတွေသေမှာကြောက်လိုပြေးနေရင်းကနေ
Reply omyanmar November 11, 2012 - 3:32 pm Aye byar.bay htine Bu pyaw bosaman kaung twae.
Reply phother November 3, 2012 - 10:47 pm သမတကြီးကိုဖိအားတွေမပေးကြပါနဲ့ခများ၊ သူ့လည်းရခိုင်ပြည်နယ်ငြိမ်းချမ်းမှုအတွက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတာဘဲနာလည်ပေးလိုက်ကြပါ။
Reply mg mg u November 3, 2012 - 11:07 pm The matter is very simple. No muslim no peace, therefore we don’t want any muslim in our state for peace..
Reply FOX November 3, 2012 - 11:30 pm http://www.weeklyeleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16249:2012-11-03-05-02-37&catid=78:2009-11-13-06-25-17&Itemid=135
Reply mr TM November 3, 2012 - 11:32 pm ဒီကိစ္စမှာစစ်တပ်နဲ့သမတလဲပါတယ်ဆိုတာတဖြေးဖြေးနဲ့ပေါ်လာပါပြီ၊ဘုန်းကြီးအတုတွေလဲပါ တယ်မန္တလေးကစစ်ကြေငြာတဲ့ဘုန်ကြီးလဲစစ်တပ်ကဖြစ်နိုင်တယ်မဟုတ်ရင်သူ့ကိုဘာကြောင့် မဖမ်းလဲ။
Reply Moharpyat November 11, 2012 - 3:47 pm Not just U Thein Sein and Army.Me too.All real myanmar citizen should involve in this international pickle(kalar) problem.
Reply true talker November 4, 2012 - 2:13 am I really appreciate your point of view,Sayar U Win Tin. If,many people will have your point of view,this really bad situation will not happened,to the worst. I wish,if, the Government Authority will consider in the way you have mentioned,can only be solve that problem.But,one track minded, negative thinking, racist believe, sure,cannot be solve this bad event of matter,that Burma,is now famous in abroad that it is,notasafe place to visit,will makes the chances to lost every thing.It is very important time for Burma, for survival in many way. Only the most poorest area,with poorest people will not have any profits out from this terrible event.
Reply ကောင်းကောင်းကောင်း ကောင်း November 4, 2012 - 6:41 am အကောင်းဆုံးကတော့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးပဲး
Reply မနွေ November 4, 2012 - 7:30 am ယခု ဖြစ်ပေါ်နေသော ပြသနာသည် ဘာသာရေး၊လူမျိုးရေး ကြောင့်ဖြစ် သောပြသနာ မဟုတ်ပါကြောင်း ယခုပြသနာသည် သမိုင်းကြောင်းနှင့် ချီပြီးဖြစ်လာသော ပြသနာဖြစ်ပါကြောင်း၊ အတိုချုပ်ပြီးပြောရလျင် ယခုပြသနာသည် ၁၉၄၂ ခုနှစ်တုန်းက ဘင်္ဂလီကုလားများ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများအား လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ် ပြီး အစ္စလာမ်နိုင်ငံထူထောင်ရန် ကြိုးစားခြင်း မှစတင်ခဲ့ကြောင်း၊ ထိုအချိန်က ဘူးသီးတောင်၊မောင်တောမြို့နယ်တွင် ရခိုင်ကျေးရွာပေါင်း ၃၀၀ ကျော်ရှိခဲ့ပါကြောင်း ယခုအခါ ၃၀ ခန့်သာ ကျန်ရှိတော့ပါကြောင်း
Reply အရမ်းမဝေဖန်လိုသူ November 4, 2012 - 8:28 am အရမ်းကောင်းတဲ့ အတွေးအမြင်ပါ။ဒီနေရာမှာ OIC ကိစ္စ ဦးဝင်းတင်ပြောသွားတာ အရမ်းသဘောကျတယ်၊
Reply ကျော် November 4, 2012 - 10:41 am ဘာကြောင့် တည်းဖြတ်ရတာလဲဗျာ
Reply အောင်သူ(သိမှတ်ဘွယ်)ရခိုင် November 4, 2012 - 11:51 am ကျွန်တော်ဟာ Islamization ရဲ့ကြောက်စရာကောင်းပုံကို ကူးယူ မီးမောင်ထိုးပြရုံသာဖြစ် ပါတယ်။
Reply အောင်သူ(သိမှတ်ဘွယ်)ရခိုင် November 4, 2012 - 12:29 pm ရာဇ၀င်မှာ နှစ်နိုင်ငံစစ်တိုက်လို့ စစ်ရှုံးရင် အဖျက်ဆီးခံရတယ်။ ဒါပေမယ့် လူမျိုးလိုက် မပျောက်ကွယ်သွားပါဘူး။ ဘာသာတရားယဉ်ကျေးမှုတွေလည်း ပျောက်ကွယ် မသွားပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ မွတ်ဆလင်တွေကို စစ်ရှုံးခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတွေ အားလုံးမှာဆိုရင် လူမျိုးပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။ သတ်ဖြတ်ချေမှုန်းသွေးနှော ခြင်းကိုခံရပါတယ်။ မွတ်ဆလင်တွေဟာစစ်နိုင်ရင် အဲဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ယောက်ျား လေးမှန်သမျှကို ခေါင်းဖြတ်သတ်ပြီး မိန်းမမှန်သမျှကို အတင်းအဓမ္မကာမ ရယူကာ သွေးနှောပစ်တာပါ။
Reply swe htwe November 6, 2012 - 12:58 am that’s right
Reply LZZ November 28, 2012 - 7:45 pm Thanks for your comment which pointed out the basic knowledge and the truth.I do appreciate this. Let everyone know the reality.
Reply Ko Ko November 4, 2012 - 12:48 pm ရခိုင်မှာ အဓိပြဿနာဖြစ်နေတာကိုကြည့်ရင် ဘင်္ဂါလီမူဆလင်တွေဘက်က သမိုင်းကိုလိမ် အာရပ်နိုင်ငံတွေအားကိုးနဲ့ အင်တာနက်တွေ မီဒီယာတွေကိုလည်း အာရပ်နိုင်ငံတွေရဲ့ အားကိုးနဲ့ လုပ်ကြ ပိုဝါဒဖြန့် ပိုမိုပြီးလိမ်လည်ဒါဟာ နှစ်ကာလကြာလာတော့ အမှန်လိုလို လူတွေကို လှည့်စားနိုင်ခဲ့ပါပြီ ရခိုင်ဘက်မှာမူဆလင် ၂ မျိုးရှိပါတယ် တစ်မျိုးက အနေကြာနေတဲ့ ကမန်မူဆလင်နဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ုဘက်ကနေခိုးဝင်လာတဲ့ ဘင်္ဂါလီမူဆလင်ဆိုပြီး ၂ မျိုးရှိတယ် ကမန်းကလူနည်းစုပါ သောင်းဂဏန်းလောက်ပေးရှိတယ်။ အခုလိုသမိုင်းကိုလိမ်ပြီး လူ့အခွင့်အရေးအရေခြုံပြီးလှုပ်ရှားနေတာက ကမန်းတွေမဟုတ်ပါဘူး ဘင်္ဂါလီမူဆလင်တွေပါ။ ကျူးကျော်ဘင်္ဂါလီမူဆလင်တွေကြောင်းပြသနာဖြစ်နေတာပါ။
Reply TM November 5, 2012 - 8:09 am ကမန်းမူဆလင် လူနည်းစုဖြစ်ခြင်း မဖြစ်ချင်းက အဓိကကြသောအကြောင်း၇ာ မဟုတ်ပါ။ ဘာကြောင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ နေထိုင်လာခဲ့သော ကမန်များ အတိုက်အခိုက်ခံခဲ့၇သလဲ ဆိုသော ဆွေးနွေးမှုဖြစ်ပေါ်လာပါ၇န် ပိုမိုဆန္ဒရှိပါသည်။
Reply KWM November 7, 2012 - 12:14 am လွန်ခဲ့တဲ့ စစ်အစိုးရခေတ် ၂ ဆက်လုံး တိုင်းပြည်မှာ အဂတိလိုက်စားမှုတွေများပြီး လဝက ဘယ်လိုဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေသူတိုင်းသိကြပါတယ်။ ငွေယူပြီး ဘင်္ဂလီတွေကို မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးပြီး ကမန်တိုင်းရင်းသားပါလို့ ရေးခဲ့ရင် ဘယ်သူဘာပြောနိုင်မလဲ။ သက်သေပြပါဆိုရင်လည်း လာဘ်ပေးသူဘင်္ဂလီရော လာဘ်ယူသူ လဝက နှစ်ဘက်လုံးက ဒီအဖြစ်မျိူးရှိခဲ့ပါတယ်လို့ ဝန်ခံပါ့မလား။ လာဘ်ပေးသူဘင်္ဂလီတွေက သူတို့ရထားတဲ့ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး အဆုံးအရှုံးခံပြီး လဝက ကို ငွေပေးခဲ့ရပါတယ်လို့ ဝန်ခံပါ့မလား။ လာဘ်ယူခဲ့တဲ့ လဝက တွေကလည်း ထောင်အကျခံပြီး ဟုတ်ပါတယ်။ ဘင်္ဂလီတွေဆီက လာဘ်ယူပြီး နိုင်ငံသားကတ်ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်လို့ ဝန်ခံပါ့မလား။ တကယ့်သက်သေက လာဘ်ပေးသူနဲ့ လာဘ်ယူတွေပဲလေ။ နောက်ဆုံးကျ ကမ္ဘာ့သတင်းစာမျက်နှာတွေမှာ ကမန်တိုင်းရင်းသားတွေကို ရခိုင်တွေက သတ်ပါတယ်။ မီးရှို့ပါတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေပဲထွက်လာတယ်။ အဓိက တရားခံက အာဏာပိုင်လို့ခေါ်ကြတဲ့ အစိုးရဝန်ထမ်းတွေ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကြောင့်ပဲ။ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲလိုချင်လို့ နိုင်ငံသားကတ်ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ ကြံ့ဖွတ်လည်း ပါတယ်။
Reply TM November 7, 2012 - 9:37 pm တ၇ားမဝင်သော ဘင်္ဂလီလူမျိုးများကို အကျင့်ပျက်အစိုး၇ဝန်ထမ်းများက ကမန်တိုင်း၇င်းသားအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ပြီး တ၇ားဝင်နိုင်ငံသားဖြစ်အောင် လုပ်ခဲ့သည်ဟုဆိုခြင်းမှာ လက်ခံစဉ်းသင့်သောအချက်ဖြစ်သည်။ သို့သော်နိုင်ငံတကာသတင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သော မီးရှိ့ခံခဲ့၇သည့် ဂြိုလ်ထုမှတ်တမ်းပါ ၇ပ်ကွက်များသည် ကမာန်တိုင်း၇င်းသားများ နှစ်ပေါ်င်းများစွာနေထိုင်ခဲ့နေ၇ာများဟုတ်မဟုတ် ဒေသခံများက ပိုသိပါလိမ့်မည်။ ၇ခိုင်ကိုအပြစ်ဆိုနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဘက်မလိုက်သတင်းမှန်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာလျင် အကျင့်ပျက်သူများဧ။် အခွင့်ယူမှုများ နည်းပါးသွားနိုင်သည် ထင်မြင်မိပါသည်။
Reply Khin November 4, 2012 - 6:49 pm Thankyou U Win Tin. You are right and your point of view is true.
Reply လှဟန် November 4, 2012 - 9:27 pm ဧရာဝတီရေတရခံတွေဖေါ်ထုတ်စရာမလိုပဲနဲ့
Replyုking November 5, 2012 - 4:22 pm အားလုံးဟာကိုယ့်အမြင်ကိုပြောချင်သလိုပြောလို့ရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံး ဟာလူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက် လူသားအားလုံးကိုကောင်းကျိုးပြုမယ်ဆိုရင်ကောင်းမွန်ပါ တယ်။ အပြစ်ရှာ၊အပြစ်ပြော၊ အပြစ်မြင်နေရုံနဲ့ သူတို့အတွက်ကောင်းကျိုးဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူး။ ရခိုင်ကသပ်သပ်၊ မူဆလင်ကသပ်သပ်တစ်ရပ်ကွက်စီထားမယ်ဆိုရင်လဲ နောင်ကျရင် အခြေအနေက ဒီထက်မကဆိုးသွားပါလိမ့်မယ်။ မူဆလင်တွေနေဖို့သီးခြားနေရာပေးဖို့ မဖြစ်နိုင် ပါဘူး။နောင်ကျရင် မူဆလင်ပြည်နယ်မတောင်းဆိုဘူးလို့ အာမမခံနိုင်ပါ။ထိုင်းတောင် ပိုင်းပြည်နယ်ကို ဗမာတွေသင်ခန်းစာယူသင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အကောင်းဆုံးပြောချင် ပါတယ်။စစ်တပ်ဒါမှမဟုတ်ရဲ၊ ဒါမှမဟုတ်အခြားသောနာမယ်နဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကို လုံခြုံရေးအတွက်စနစ်တကျတာဝန်ပေးစေချင်ပါတယ်။ပေးရုံတင်မဟုတ်ဘဲ ဆုပေးဒဏ်ပေး စနစ်ကျင့်သုံး၊ ပြည်သူကိုချပြ၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနဲ့လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင် ရခိုင်ပြည်နယ် အေးချမ်းပါလိမ့်မယ်။ အကောင်းမြင်ဝါဒနဲ့ကြည့်မြင်ပြီး အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ကြစေချင်ပါတယ်။
Reply robert November 5, 2012 - 7:18 pm ဟုတ်တယ်ဒါနိုင်ငံရေးလှည့်ကွက်တစ်ခု လို့မြင်မိတယ် တစ်ချိန်က လူမရှိတဲ့နေရာတွေမှာ ဗုံးတွေ့ လူမမြင်တဲ့ အမှိုက်ပုံတွေ မှာ ဗုံး ကွဲး အမျိုးမျိုး လှည့်ကွက်တွေဆင်နေကြတာ သ်ိသာပါတယ်
Reply တိုင်းရင်းသား November 6, 2012 - 6:02 pm အဘ ဦးဝင်းတင်ခင်ဗျား-
Reply အောင်မျိုး November 12, 2012 - 6:25 pm တိုင်းရင်းသားပြောတာကိုထောက်ခံပါတယ်။
Reply guide November 6, 2012 - 6:39 pm ဒီအမြင်ကို ထောက်ခံပါတယ် ။ ဘာပဲပြောပြော စစ်တပ်တွေမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်လို. လုံခြုံရေးကိုဘန်းပြပြီး နိုင်ငံတကာတွေကမြင်လာအောင် လုပ်ကြံပြနေတယ်လို.မြင်တယ်။ နောက်ကွယ်ကနေကြိုးကိုင်တယ်ဆိုတာကလဲ သူတို.ပဲနေမှာ ။ ကုလားက ရခိုင်လုပ်တယ်ထင်၊ရခိုင်က ကုလားလုပ်တယ်ထင်နေတဲ.အချိန်မှာ သူတို.ကနောက်ကနေပြီး လုပ်တာလဲဖြစ်နိုင်တယ်။ စဉ်းစားစရာကောင်းတဲ.အချက်ပါ။ ဒါကိုအကြောင်းပြပြီး စစ်ရေးအုပ်ချူပ်တဲ.စနစ်ပြန်မဖြစ်ပါစေနဲ.လို.ပဲမျှော်လင်.တယ်။
Reply ချက်ကြီး November 6, 2012 - 10:10 pm စစ်တပ်အုပ်ချုပ်တာကိုမလိုလားဘူး
Reply cv.mm November 7, 2012 - 9:44 pm လွန်ခဲ.တဲ. နစ် သုံး လေးဆယ် တုံးက နိုင်ငံရေး ပုံစံ အတိုင်းပဲ , တိုင်းပြည်တည်ဆောက် နေတဲ.အချိန် တိုးတက်အောင် ၀ိုင်းဝန်းဖို. မစဉ်းစားဘူး ၊ သပိတ်စုံ သူပုန်ထအောင် ၊ ဘာဖြစ်လို. လုပ်ချင်နေရတာလဲ ၊ တခုပဲ ပွင်.ပွင်. လင်းလင်း နားလည်ထားရမှာက မြန်မာပြည်မှာနေ မြန်မာပြည်မှာမွေး ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသား ဆိုရင် ၊ နိုင်ငံကိုကာကွယ်ရမှာ နိုင်ငံသားတိုင်းရဲ. တာဝန်ပါ ၊ စစ်တပ်ကြောင်. ပါတီတွေကြောင်.၊ ဦးသိန်းစိန်ကြောင်. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကြောင်. ၊ ဟို လူလုပ်တာ ဒီလူလုပ်တာ ဆိုပြီး ပြော မနေ ပဲ ၊ ကိုယ်.တာဝန် ကိုယ်တတ်နိုင် သလောက် တိုင်းပြည်အတွက် အကျိုးပြု ဖို.ကိုပဲ စဉ်းစား ပါလို. နိုင်ငံသားတယောက် အနေ နဲ. , အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် နာယက တဦးဖြစ်သည့် သတင်းစာဆရာဟောင်း ဦးဝင်းတင် ကိုအကြံပြု ချင်ပါတယ် ။
Reply Sea November 8, 2012 - 10:43 am မြန်မာပြည်မှာအကောင်ဆုံးက စစ်အုပ်ချုပ်ရေးပဲး
Reply Soe soe November 8, 2012 - 10:56 am မှန်ပါတယ် စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာ ဒိလိုမျိုးဆိုးဆိုးဝါးဝါးမဖြစ်ဘူး
Reply မန်းအင် November 8, 2012 - 11:04 am ပွဲးပြီးအသံထွက်လာသူများ
Reply Si November 8, 2012 - 9:10 pm A group of people who create Arakan Unrest will write negative comments on U win Tin’s comment, these people should have open mind.
Reply အောင်မျိုး November 12, 2012 - 5:37 pm လူမျိုးရေးနိုင်ငံရေးတွေမပါစေနဲ့ဆိုတဲ့ စကားအတွက်
Reply ရာဇာ November 14, 2012 - 4:46 pm ရခိုင်ကိစ္စ ကိုအမှန်အတိုင်း ပြောရရင် အဓိက တရာခံကတော့ အစိုးရ ပါဘဲ…လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း များစွာကတဲက အကျင့်ပျက် ဝန်ထမ်း၏ မှားရွင်းသော လုပ်ဆောင်မှုများကြောင့် ယနေ့ ဖြစ်ပေါ်နေသော အကြမ်းဖက်မှု များပေါ်ပေါက်လာရသည်….ထိုအကျင့်ပျက် ဝန်ထမ်းများ သည်လည်း ဋ္ဌာနဆိုင်ရာ အစိုးရဝန်ထမ်း များဖြစ်သောကြောင့် အစိုးရတွင် အဓိက တာဝန်ရှိသည်ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်…မိမိ၏ ရာထူး နှင့် စည်းစိမ်ကို မထိပါးနိုင်လျှင် မျက်စိလွှဲ ခဲပြစ် လုပ်ခဲ့ခြင်း များကြောင့် အခုလိုကိစ္စများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်၏…သို့သော် မိမိ၏ ရာထူးနှင့် စည်းစိမ်ကို ထိပါးလာနိုင်သည်ဟု ယူဆခဲ့လျှင်တော့ မရှိသော ဥပဒေများ ကိုထုတ်သုံး၍ သော်၎င်း…အထိုထိုသော ဥပဒေ အသစ်များ ထုတ်၍ သော်၎င်း အတင်းနှိပ်ကွပ် ခဲ့သော သာဓက များစွာ ရှိခဲ့သည် ကိုတော့ အားလုံးအသိပင်ဖြစ်၏….ထို့ကြောင့် ယခု အစိုးရသည်လည်း လူမျိုးခြား အစိုးရမဟုတ်သလို မနေ့တနေ့ကမှ ခေါင်းဆောင်ပိုင်း ရောက်လာသော လူများလဲ မဟုတ်ပါသဖြင့် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေအနေများသည် အစိုးရ၏ စီမံခန့်ခွဲမှု နှင့် တရားဥပဒေများ ထိရောက်စွာ အသုံးပြုခြင်းများ မရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်နေရသည်မှာ လယ်ပြင်ဆင်သွားသလို ထင်ရှားနေပါသည်..သို့ဖြစ်ပါ၍ မိမိတို့၏ အမှားများကို ပြည်သူလူထု ထံ ဝန်ခံပြီး အခြေအနေများကို တရားဥပဒေ နှင့် အညီ အမြန်ဆုံး ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း မှသာလျှင် ပြည်သူလူထု ၏ စစ်မှန်သော အစိုးရ ဖြစ်ကြောင်း သက်သေ ပြနိုင်မည် ဖြစ်သည်.
Reply U kyi win November 15, 2012 - 8:06 pm ဦးဝင်းတင်ပြောမပြောတော့မသိဘူး ဒါပေမဲ့လူ့ အခွင့်အရေး လူ့ အခွင့်အရေးလို့ အော်နေရအောင်အဲဒီကောင်တွေဘယ်လောက်လူပီသလို့ လဲမေးချင်တယ်နိုင်ငံဦးဆောင်ပါတီတခုရဲ့ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ကကိုယ်တိုင်းပြည်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတိုင်းရင်းသားဒေသတစ်ခုဘာသာယဉ်ကျေးမှုပျက်မှာမစိုးရိမ်ဖူးလား
Reply myo swe November 27, 2012 - 10:11 pm ရခိုင်အရေး ကချင်အရေး တွေ အလုပ်သမားဆန္ဓထုတ်ဖေါ်ပွဲ
Reply myint May 15, 2013 - 10:28 pm ဘယ်သူတွေဘာပြောပြော မြန်မာကတော့မြန်မာဘဲချစ် မှာပဲလေး အမှိုူးဘာသာမထိပါးနဲ့ ကျွန်တော်တို သူများနိုင်ငံ နေရင်လည်း သူများတွေရဲ့ ယည်ကျေးမှူ့တော့လူလိုသိရမှာပဲ မြန်မာနိုင်ငံ ဘာဘာသာ..ဆိုတာလူတိုင်းသိဖို့ပဲလိုတယ်………………